I-china 4㎡ SOLAR MOBILE LED TRAILER mveliso kunye nabenzi | I-JCT
4m2 Iselfowuni ekhokelwa siselfowuni（UmzekeloI-E-F4 SOLAROkokuqala idibanisa i-solar, i-LED yangaphandle yesikrini esigcweleyo kunye neenqwelomoya zentengiso ezihamba kunye kunye kwi-organic. Isebenzisa ngqo amandla elanga njengonikezelo lwamandla olungaphazanyiswa, olukhuselekileyo, oluthembekileyo, olusebenzayo, olulunge ngakumbi kwindalo esingqongileyo kwaye ngokuhambelana nomgaqo-nkqubo omtsha wokugcina amandla kunye namandla, ukophula imida yendlela yakudala yokuhambisa umbane efuna ukufumana unikezelo lwangaphandle lwamandla okanye abavelisi.
Isikrini esikhokelwayo esingu-360
Inkampani ye-JCT ngokuzimeleyo iphuhlisa iintsika ezijikelezayo zesikhokelo sokudibanisa inkqubo yokuxhasa kunye nokuphakamisa ukubuya kwe-hydraulic kunye nenkqubo yokujikeleza kunye eqonda ukujikeleza kwe-360 degree ngaphandle kwe-angle efileyo, ukuqhubeka nokwenza isiphumo sonxibelelwano, kwaye kufanelekile ngakumbi kwisixeko, kwindibano, kwizicelo zomnyhadala ezinjengenkundla yezemidlalo yangaphandle .
Imbonakalo yefashoni, itekhnoloji eguqukayo
Endaweni yokuhamba kwesitayile seemveliso zangaphambili, iitreyila ezintsha zamkela uyilo olungenachaphaza ngemigca ecocekileyo necocekileyo kunye nemiphetho ebukhali, ebonisa ngokupheleleyo ingqiqo yesayensi, itekhnoloji kunye nokuphucula. Ilungele ngokukodwa umqhubi wezithuthi, umboniso wepop, umboniso wefashoni, imveliso yemoto entsha, njl.
Ithunyelwe inkqubo yokuphakamisa hydraulic, ikhuselekile kwaye izinzile
4m2I-trailer yeselfowuni ekhokelwa lilanga yamkela inkqubo yokuphakamisa i-hydraulic engenisiweyo kunye ne-1m yokuphakama kokuhamba kwaye ikhuselekile kwaye izinzile. Ukuphakama kwesikrini se-LED kunokuhlengahlengiswa ngokweemfuno zokusingqongileyo ukuqinisekisa ukuba abaphulaphuli banokufumana eyona engile yokubukela.
Uyilo olwahlukileyo lwebar
4m2I-trailer yeselfowuni ekhokelwa lilanga ixhotyiswe ngesixhobo esingangeni ngaphakathi kunye nokuqhekeza ngesandla, kwaye inokutsalwa ukuba ihanjiswe yimoto xa isenza usasazo nokwazisa. Ubume boomatshini bokuxhasa imilenze yokuxhasa kulula kwaye kuyasebenza ngokukhawuleza.
Ukunikezelwa kwamandla elanga kunye nebhetri
4pcs 180W iipaneli zelanga. Umzekelo, ixesha elifanelekileyo lokutshaja elangeni libalwa njengeeyure ezi-5 ngosuku. 180 * 4 * 5 = 3600W, la mandla anokuhlala usuku olu-1. Kuzinzile kwiintsuku ezinelanga kunye neebhetri ze-12pcs 2V 400AH.
4m2Iitreyila ezikhokelwa lilanga eziselfowuni zineendlela ezizimeleyo nezingaphazamiseki zonikezelo lwamandla kunye nokusebenza okuphezulu. Kukhuselekile, kunokuthenjwa, kuzinzile, akunangxolo, kubume bendalo kwaye akuphelelanga kwindawo.
1. Ubukhulu: 2700 × 1800 × 2300mm, isixhobo esisesandleni: 400mm, kwiTow bar: 1000mm
2. Umbala wangaphandle ogcina umbane we-LED (P10) ubungakanani: 2560 * 1280mm
3. Inkqubo yokuphakamisa i-Hydraulic: I-Italiya yangenisa iisilinda ze-hydraulic, ubude bokuhamba obuyi-1000m.
Ukusetyenziswa kwamandla 4. (Umyinge wokusetyenziswa): 50W / m2 (kulinganiswe).
5. Inkqubo yevidiyo yeMultimedia: Inkxaso ye4G, idiski yeU, iifomathi zevidiyo eziphambili.
Umzekelo E-F4 Solar4m2 SOLAR MOBILE LED TRAILER ）
Igama lebrand I-JCT Ubungakanani bangaphandle 2700mm (L) x1800mm (W) x2300mm (H)
Waqhekeza Isandla / seHydraulic ITire Amavili erabha aqinileyo
Ukuxhasa imilenze 4pcs
Isikrini sokugcina amandla se-LED
Ubungakanani besikrini 2560mm (W) * 1280mm (H) Phaya Pitch 10 mm
Ubungakanani beModyuli I-320mm (W) * 160mm (H) Ukuqaqamba 5500cd / m²
Amandla amakhuluUkusetyenziswa I-150W / m2 Umsebenzi wobomi Iiyure eziyi-100,000
Inkqubo yokunyusa i-Hydraulic
Inkqubo yokuPhakamisa i-Hydraulic Uluhlu lokuphakamisa i-1000m
Inkqubo ejikelezayo yeHydraulic Isikrini sinokujikeleza iidigri ezingama-360
Inqanaba lephiko Ngokuchasene nenqanaba le-8 yomoya emva kokuphakamisa isikrini kwi-1000mm
Ubungakanani 1480mm x 670mm * 4pcs Amandla 180W * 4 = 720W
Igalelo ombane 9-36V Imveliso yombane 24V
Ikaliwe amandla okutshaja I-720W / 24V
Amandla aphezulu e-photovoltaic array I-1170W / 24V
Umdlali INova TB4-4G Ukufumana ikhadi INova MRV316
Isivamvo Luminance Nova
Egqithileyo I-2㎡ SOLAR MOBILE I-LED TRAILER
Okulandelayo: I-trailer ye-VMS yetreyila- umbala opheleleyo
Mobile Ngokukhokelwa Screen Iinkuphelostencils, Ekhokelwayo Iinkuphelostencils Mobile For Sale, Ekhokelwayo Iinkuphelostencils Mobile, Ekhokelwayo Inqwelo erhuqwayo, Mobile Led Advertising Iinkuphelostencils, Iselfowuni eLijongene neBillboard Truck,